Sida looga yaabsado lammaanahaaga, fikradaha iyada sixirka ka dhigi doona. | Ragga Stylish
Sidee lamaanahaaga uga yaabsataa
Haddii aad xiriir deggan la leedahay lammaanahaaga, waxaa laga yaabaa inaad soo gashay xilli keli ah. Jadwalka joogtada ah, maalinba maalinta ka dambeysa ololka ayaa sii daalaya. Shaqada ama iskuulka ayaa laga yaabaa inaysan kuu oggolaan inaad waqtiyada si buuxda ugu raaxaysatid. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer waa wakhti fiican inaad siiso lamaanahaaga faahfaahin oo aad tusto sida aad ugu faraxsan tahay inaad la joogto.
Qodobkaan waxaan ku siin doonaa xoogaa tilmaamo ah sida looga yaabsado lamaanahaaga. Ma rabtaa inaad ku sii wadato xiriir qurux badan oo xiiso leh? Halkan waxaan kuu sheegeynaa faahfaahin badan 🙂
1 Xusuusnow sababta uu wehelkaaga u yahay
2 Kari quraac sariirta una dir fariimo wacan
3 Qoraallo jacayl iyo maalin nasasho
4 Sida looga yaabsado lamaanahaaga faahfaahin ama casho
5 Xusuusnow taariikhda koowaad oo u samee album album ah
Xusuusnow sababta uu wehelkaaga u yahay
Fikradda ah inaad noloshaada oo dhan la wadaagto qof kale waa wax aad u qurux badan. Si kastaba ha noqotee, way adkaan kartaa haddii adiga iyo qofka aad la nooshahay marwalba aad si wanaagsan u dhex mari weydaan. Waxaa jiri doona doodo, waqtiyo xun (marwalba way jiraan), laakiin tani maahan inay kaa horjoogsato inaad tusto sababta aad u dooratay inaad la joogto.
Looma baahna in la sugo taariikhaha sida maalmaha dhalashada ama sannad-guurada. Si fudud oo faahfaahsan marka aad ugu yaraan filanayso waxay labadiinaba u noqon doontaa wax togan. Waa inaan xasuusnaano sida aan jecelahay in si wanaagsan loola dhaqmo, waa inaan u qabanaa isla qofka kale. Sidaas darteed, waa wax aan la dafiri karin inaad dayacdo lamaanahaaga.
Tilmaamahan soo socda waxaad ku ogaan doontaa sida aad lamaanahaaga uga yaabiso wakhti kasta.
Kari quraac sariirta una dir fariimo wacan
Waxay umuuqataa ereyada caadiga ah ee taxanaha iyo filimada laakiin waa faahfaahin qurux badan. Ka fikir daqiiqad inay tahay inaad goor hore kacdo oo aad sariirta ka kacdid (sida ay u wanaagsan tahay) inaad quraac u diyaariso oo aad u labisto. Haddii aad lammaanahaaga u sameysid quraac, waxaad diyaarin doontaa waxa uu aadka u jecel yahay, Waad badbaadin doontaa isaga waqtigaas iyo dadaalkaas, waxaana ugu fiican, inuu ka heli doono qofka uu aadka u jecel yahay.
Tani waa hab wanaagsan oo aad ugu hibeyn karto lammaanahaaga sida aad u jeceshahay iyada iyo dhiirigelinta aad u gudbiso si aad u bilowdo maalinteeda maalinlaha ah. Kuwa naga mid ah ee lacag la'aantu, tani waa faahfaahin aan u baahnayn kharash dheeraad ah oo si dhib yar u baahan dadaal (wadar ahaan, waa inaad adigana u diyaarisaa quraac).
Markaad shaqo tagto, yaabku weli ma dhammaan. Haddii aad go’aansato inaad furto mobilada waxaad arkaysaa farriin u sheegaysa wax kasta oo aad jeceshahay, qaddari oo ku qanc dadaalkeeda. Intaas oo kaliya maahan, laakiin sidoo kale sida ay ugu faraxsan tahay adiga iyo sida aad ugu nasiib badan tahay inaad hesho qof iyada oo kale ah. Faahfaahintani waxay dhammeyneysaa ciyaarta oo waxay ka dhigeysaa mid iftiin ku leh farxad.
Faahfaahintani waa mid gebi ahaanba qiimo jaban Anigana i aamin, wax badan ayey kaa caawin kartaa.
Qoraallo jacayl iyo maalin nasasho
Lamaanahaaga ka yaabso markuu shaqada ka yimaado. Qor qoraallo aad ugu sheegeyso waxyaabo fiican iyada, isla markaana, u sheeg waxa ay tahay inay sameyso si ay u ogaato hadiyad gaar ah oo aad iyada u leedahay. Markaad akhrinaysid qoraalada, xiisaha iyo farxadda ayaa kusii kordheysa illaa heer aad ka dhigeyso inuu iska iloobo dhammaan dhibaatooyinka shaqada iyo waajibaadka saaran.
Markaan gaadho dhamaadka Waxaad arki doontaa in hadiyaddu tahay nooc ka mid ah "maalinta nasashada." Maalintani waxay u adeegtaa inaad illowdo dhammaan waajibaadka iyo waxyaabaha xun oo aad naftaada u hurto. Waxay noqon kartaa qiime jaban ama maalgelin xoogaa ah. Xulashada ugu horreysa waxay noqon kartaa in lagu diyaariyo barkadda qubeyska oo ay ku jiraan biyo kulul iyo xumbo badan. Waxaad ku qurxin kartaa shumacyo, saliidaha udgoon, kareem qoyan iyo galaas wanaagsan oo aalkolada aad ugu jeceshahay.
Tani lafteedu waxay kaa dhigeysaa inaad nasato oo aad iska ilowdo dhibaatooyinkaaga oo dhan, xitaa saacado yar. Maalin kale waa inaad wax ku maal gashato spa ama duugista. Wareegga nasashada ee spa oo leh sauna iyo jacuzzi ma aha mid aad qaali u ah waana ikhtiyaar fiican oo lagu nasto.
Sida looga yaabsado lamaanahaaga faahfaahin ama casho
Casho aad samaysay waa taabasho weyn. Diyaarso weelka lammaanahaagu jecel yahay ama ka raadi qashin asalka ah khadka tooska ah. Qorshahan, waa muhiim in xoogaa waqti la helo tan iyo, marka sifiican loo sharaxo suxuunta, waa inbadan oo ay ubaahanyihiin si loo diyaariyo. Haddii aadan ku fiicnayn karinta, waxaad ku casuumi kartaa casho goobta ay ugu jeceshahay ama maqaaxi gaar ah oo ka sii macaan ama jacayl leh. Tani waxay si cad u kordhin doontaa qiimaha cashada.
Maskaxda ku hay in ku dadaalka diyaarinta wax lammaanahaagu jecel yahay had iyo jeer lagu qiimeeyo wax ka badan bixinta casho qaali ah oo raaxo leh. Dhamaadka maalinta, adoo wax keydsanaya, dhamaanteen waan awoodi karnaa casho maqaaxi iyo inaan noqono labo qof. Si kastaba ha noqotee, ku dadaalka sidii loo diyaarin lahaa saxan hodan ah, gaar ah oo u heellan ayaa ah wax isbeddel keenaya.
Waxaad sidoo kale sameyn kartaa casho kaligaa ah oo aad iibsan kartaa faahfaahin. Hadiyadaha maadiga ahi ma noqon karaan kuwa ugu fiican, laakiin wax sidaas oo kale ah ayaa had iyo jeer waxtar leh. Haddii aad lacag heysato waxaad siin kartaa jawharad ka qiimo badan ama, haddii taa lidkeeda, aad rabto inaad keydiso madaafiicda culus daqiiqado aad u habboon, waxaad had iyo jeer siin kartaa ubaxyo, xayawaan cufan ama nacnac.
Xusuusnow taariikhda koowaad oo u samee album album ah
Wax lamid ah noolee daqiiqad aad heshay taariikhdaada koowaad. Lammaanahaaga u kaxayso meeshii aad dhunkatay markii ugu horreysay si aad u xusuusato daqiiqadihii ugu horreeyay iyo wixii kugu soo kordhay.
Markaad goobtaas joogtid, waxaad diyaarin doontaa album aad u qurux badan oo ay ku jiraan dhammaan sawirrada ugu khuseeya ee aad soo wada qaadatay muddadii aad wada joogteen. Hadiyadani maahan mid daqiiqad kaliya ah sida inta kale ee aan ilaa hada aragnay, laakiin waxay kaa caawin kartaa inaad xasuusta gacanta ku hayso markasta oo loo baahdo ama aad rabto inaad xasuusato.
Faahfaahinta kale waxay noqon kartaa maalin wadajir ah oo la sameeyo keeg ama xoogaa macaan, safar la siiyo, la sameeyo farsamo u hibeysa wax isaga u qurux badan, wicitaan fudud oo lagu xusuusiyo sida aad u jeceshahay ama habeen wanaagsan oo qiiro leh waxay noqon kartaa faahfaahin oo calaamadeeya faraqa oo soo nooleeya ololka.
Waxaan rajeynayaa in talooyinkani ay kaa caawin doonaan inaad ogaato sidaad lamaanahaaga ula yaabto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sidee lamaanahaaga uga yaabsataa
Dayrta / qaboobaha 2018 moodada